Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Dagaal Culus Oo Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Dagaalkan waxey ciidamada Mujaahdiinta WI Shabeelada hoose ku qaadeen fariisinka maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteem halka Loo Yaqaano Shanta Lafoole ee degmada Lafoole.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay deegaano badan oo dhaca wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo demgada Afgooye.
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi ayaa xaqiijinaya in tiro ka tirsan maleeshiyaatka Kooxda Ridada Somalia baqti iyo dhaawac ay ku noqdeen dagaalkaasi,waxeyna goobtan ay weerareen ciidamada Mujaahidiinta sidoo kale ay aheed isbaaro maleeshiyaatka Murtadiinta si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka iyo gaadiidka Shacabka ee ku socdaalaya wadada isku xirta Muqdisho Iyo Afgooye.
Dagaalkan waxa uu kusoo aadayaa xilli habeen hore ciidamada Mujaahidiinta dagaal culus ay ku qaadeen fariisinka maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen dhismaha Warshadii hore Nacnaca degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho kaasi oo sidoo kale khasaara Nafeet iyo Mid hanyadeed lagu gaarsiiyay Maleeshiyaatka Murtadiinta.